Azo ekena ve ny mividy backlinks tranonkala?
Ity lahatsoratra ity dia hahatonga anao hanongotra ny fomba ataonao SEO tranonkalanao. Ny iray amin'ireo trangan-javatra mahazatra indrindra momba ny SEO dia miatrika ny dingam-panatontosana loharanom-baovaon'ny Internet dia ny fanirian'ny olona hamaritra ny teny fikarohana rehetra ao amin'ny pejiny. Mandany fotoana, vola ary ezaka ny olona hahazoana rindran-damina amin'ny tranokalam-pifaneranana ary hampifantoka azy ireo.
Na izany aza, amin'ny tena zava-misy ny takelaka misy rohy mankany amin'ny takelaka dia miseho amin'ny fomba hafa arakaraky ny azonao eritreretina fa misy lahatsoratra vitsy an-jatony izay misy referanda amin'ny fikarohana - cheap virtual windows server. Tsy afaka mahazo teny fanalahidy manan-karena ianao mba hahafahanao mamaritra ny fikarohana. Andeha hofakafakaintsika ny fomba fiasa amin'ny tena izy.
Google dia mankasitraka ireo sehatra manana fahefana
Raha manana fanontaniana ianao momba ny antony anomezan'i Google fitokisana sy tombam-bidy ho an'ny sehatra manana fahefana, dia misy valiny io fanontaniana io tsotra. Tombontsoa lehibe sy lava izay efa nalaza teo amin'ny mpiserasera dia nivadika ho rohy mankany amin'ny pejy natokana ho azy. Ny mpampiasa, toy ny vohikala hafa, dia mampifandray amin'ny marika ankafizina amin'ny sitrapony amin'ny fomba voajanahary tanteraka. Izany no antony ahafahan'i Google mijery pejin-drindrina avy amin'ny marika lehibe miaraka amin'ny fahatokisana ary azonao antoka fa ny ankamaroany dia nahazoana ny backlinks ho azy. Ny profil-tsarimihetsika maromaro dia tokony hanompo ho antsika toy ny sasantsasany izay ilaintsika hanarahana ny Google fa ny marika ihany koa dia mety hahasarika azy ho sarobidy sy ara-dalàna. Azo ekena ny handika ny pejin'ny tranokalam-pifaneraserana amin'ny tranonkala manana TOP ao amin'ny SERP. Nahoana ny tranonkala? Pejy iray amin'ny aterineto no sehatra manan-danja indrindra ao amin'ny tranokala iray sy ny karatry ny antsonao ho an'ny mpampiasa sy ny milina fikarohana. Any amin'izay misy ny mpanjifanao na tranokala hafa dia mety hampifandray anao ary aiza no ahafahanao mametraka fitokisana aminao.
Mila mividy backlinks ho an'ny tranoko ve aho?
Ny tranonkalan'ny tranonkala dia tokony ho tsara vintana hanome ny mari-pamantarana marina ho an'ny fitaovan'ny fikarohana. Ny fikarohana ao amin'ny tranokalan'ny fikarohana ao amin'ny tranonkala dia manampy ny fampivoarana fifamoivoizana sy kalitao bebe kokoa. Tadiavo izay fikarohana rehetra tianao hotratrarina. Na izany aza, raha ny momba ny fananganana rohy dia mila mampihatra faneriterena ianao. Mazava ho azy, misy fakam-panahy hampiasa ny pejy mahery indrindra ao amin'ny tranokalanao mba hifanaraka amin'ny teny filamatra tianao indrindra. Na izany aza, tokony mila mahatsiaro ianao, ny lafiny lehibe indrindra tokony hataonao dia ny manangana fitokisana amin'ny Google. Hatramin'ny nanomezan'i Google fitokisana, ny loharanon'ny tranonkalanao dia tsy hihoatra mihitsy. Ary aorian'izay, ny fitokisanao kokoa no manangana manodidina ny marika an-tserasera, ny fahefana bebe kokoa ny tranonkala.
Misy tranonkala maromaro izay mitovitovy amin'ny TOP ny valin'ny fikarohana. Raha te hijery ny mombamomba ireo rohy ireo marika goavana ianao, dia azonao marihina fa tsy misy tranonkala hafa manana rohy mankany amin'ny pejy. Ireo tranonkala ireo dia afaka mamaritra ny teny fikarohana lalovan'ny fifaninanana raha tsy misy rohy malaza tokana amin'ity pejy ity. Ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fahefana sy ny fitokisany izay natsangany tamin'ny Google. Porofo mazava izany mampiseho amintsika fa mila mifantoka amin'ny fanorenana marika isika fa tsy mifandray amin'ny rohy ao amin'ny pejy fandraisana. Hanampy anao ho lasa marika lehibe eo imason'ireo milina fitadiavana ianao ary hanangana ny toerana misy anao.